4 KWEEKLABU: UKUMELWA, INTSINGISELO NOKUNYE OKUNGAKUMBI
Kule nqaku, uya kuba nakho ukwazi yonke into malunga 4 yeewands, ukumelwa kwayo, inkcazo, intsingiselo kunye nenye into. Ke ndiyakumema ukuba usijoyine kwaye sonwabele konke oku kunikwa yile menyu inomdla. Kuya kuba yinto enomdla!
1 4 yeewands
2.2 I-4 yeewands kumgangatho waseSpain
2.3 I-4 yeewands tarot Marseille
3 I-4 yendibaniselwano erhabaxa
El 4 yeeWands tarot, Yeqela le-arcana encinci. Eli likhadi elilungileyo, elibonisa imiqondiso elungileyo phantse kuzo zonke iinkalo zobomi bethu (kuxhomekeke kwindibaniselwano kunye nesizathu somqulu).
Inokuba likhadi lesikhokelo, elizama ukusixelela ukuba sibeke ezinye izinto kwixesha elidlulileyo kwaye sitshintshe okwangoku ngezenzo zethu. Isimema ukuba sibe ngcono kwaye sixolele, ukuqala imijikelo emitsha.
El 4 yeeWands tarot, kwi-archetype yayo yoqobo, iveza ngokomfanekiso wayo, abantu ababini abadanisa bonwabile, isithsaba esikhulu seziqhamo kunye neentyatyambo zihombisa iintonga ezi-4 ezinde eziqinileyo eziqikelelweyo.
Ungabona abanye abantu ngasemva kunye nenqaba, apho kuthathwa khona, ukubhiyozelwa okuqhubekayo. Ileta yonke ibonisa uvuyo, uzinzo, impumelelo, ukonwaba, kwaye konke oku kudluliswa njengembalelwano nomntu ofuna umyalezo ngokufunda iileta.
Into yomlilo yile ichaza eli khadi, ngaphandle kwamathandabuzo yinto yokucoca, yomelele, inamandla, kwaye xa ichazwa ngale arcanum, ithetha ngotshintsho, amandla, ukucoca, kwaye iyinto eluncedo kakhulu, kodwa Kuya kufuneka ulumke kuba asinakuvumela umnqweno wokufumana le nto siyifunayo ukuba isenze siphumelele kulawulo lwemeko, kufuneka sihambe ngokuzolileyo.
Le arcana encinci imele amaxesha okuchuma kunye nolonwabo, ukumanyana, amaxesha afanelekileyo okuqala amashishini amatsha, ukwenza izinto ezintsha, ukutyala imali, ukuqala ubudlelwane okanye ubuhlobo, nokunye okuninzi.
Emsebenzini uya kuba nolwalamano oluhle nawo wonke umntu, izindululo zakho ziya kuthathelwa ingqalelo, ungafezekisa unyuselo, impumelelo yeprojekthi obusebenza kuyo, uya kufumana ukuncoma okuninzi.
Kwezempilo, yonke into iza kusebenza ngokuchanekileyo, ukuba ulinda iziphumo zovavanyo lwezonyango olwenziweyo, ezi ziya kuphuma kakuhle kakhulu. Lixesha elifanelekileyo lokuzilolonga nokukhathalela impilo yakho. Khumbula ukuba ukuzikhathalela kwakho ngoku kukutyala imali kwixesha elizayo.
Ngokuthandana ukuba awunalo iqabane, uya kudibana nomntu obaluleke kakhulu, baya kuvana ngokumangalisayo. Kwaye ukuba sele uneqabane, banokufuna ukuya kwinqanaba elilandelayo, njengomtshato, kwaye babe nomntwana. Ngaphandle kwamathandabuzo, iya kuba lixesha elifanelekileyo lokwenza imiceli mngeni emitsha kunye.
Lixesha elifanelekileyo lokunika umntu wangaphakathi ixesha lokucamngca, ukucamngca, oku kuyakuvumela ukuba ulungelelanise iingcinga zakho, iminqweno yakho kwaye ungavana ngokupheleleyo nabantu obathandayo.
Ukuba ikhadi libonakala liguquliwe, yonke into ibonisa ukuba kufuneka silinde kwaye sibe nomonde, kuba izinto esinqwenela ukuba nazo ngoku azizukufika okwangoku. Kubalulekile ukugcina unxibelelwano nosapho kunye nabahlobo, ukunqanda ukungaqondani okunokubangela iingxaki ezinzulu.
Siyakumema ukuba uqhubeke nokufunda malunga ne ijack yemihlakulo, nayo yonke into efihliweyo yile leta, ngenisa ikhonkco.
I-4 yeewands kumgangatho waseSpain
I-4 yeWands iboniswa njengeleta yolonwabo, isizalisa ngovuyo, uzinzo olukhulu lweemvakalelo olusivumela ukuba sidale, siqulunqe, simanyane kwaye sifezekise oko sikucebisayo. Izisa namaxesha okuphumelela kunye nokubhiyozela.
Ukuba ibonakala ikwimo yayo elungileyo, iya kuvelisa uxolo, ulungelelwaniso, ukufika kweendaba ezimnandi, abantwana kunye nempumelelo eqinisekileyo. Konke oku kuyaphuphuma phambi kwethu kwaye kufuneka sikulungele ukufumana konke okulungileyo esikunikiweyo.
Siya kuba sempilweni entle, kwaye ukuba sinesifo, inkqubo yokuchacha iqala. Usixelela ngemitshato, ubudlelwane obuhle nabahlobo, ukufika kweentsana, imali, lelona xesha lilungileyo lokutyala imali, ukwenza iprojekthi kwaye uphumelele.
Kodwa kwenzeka ntoni ukuba ikhadi libonakala liguquliwe? I-4 yeewands kumgangatho waseSpain, ityhila kuthi ukuba kufuneka sizilumkele iintsilelo, kuba kunokwenzeka ukuba kunokubakho uqhekeko kubudlelwane bobabini njengesibini nakubuhlobo, iingxaki ezingapheliyo. Kubalulekile ukuba ungenzi mali, kwaye uye kugqirha ukuvavanya impilo yakho.
I-4 yeewands tarot Marseille
Iiklabhu ezi-4 ngasekunene zisibonisa ubuso obuncumileyo, ukonwaba okukhulu, umnqweno wokuphumelela kunye nokufezekisa iiprojekthi, ukudityaniswa kwezimvo, ikamva eliqaqambileyo, inzuzo ekhuselekileyo.
Yileta edala uxolo noxolo lo gama sisonwabela izibonelelo ezisinika zona, ukudala imeko yemibhiyozo, ukulungelelanisa imitshato, ukucwangcisa ukufika komntwana, ukwenza ubuhlobo buvelise, ukufumana imali kutyalo-mali emsebenzini okanye ukufumana ukunyuka, phakathi kwabanye.
Ukuba ikhadi libonakala libuye umva, i I-4 yeewands tarot Marseille ibonisa ukuba umntu angafumana imiqobo kunye neengxaki zokwenza yonke into ecetywayo, eya kuthi ibangele imeko zonxunguphalo, ukudana nokungoneliseki.
Kubalulekile ukuba uhlale uzolile kwaye uzenzele iinjongo zexesha elifutshane, hayi enkulu kangako, ekuvumela ukuba uhlangane nazo kwaye ke uphephe iimeko ezikwenza uzive umbi kwaye unxunguphele. Khumbula ukuba iileta ziyasikhokela, kuxhomekeke kuthi ukuba siyakuba yintoni isimo sengqondo esijamelana naso kwezi meko zobomi.
I-4 yendibaniselwano erhabaxa
Ukutolikwa kuyahluka ngokuxhomekeke kumakhadi avela ngexesha lokusasazeka, kwaye ukusuka apho, ukufunda okuhambelanayo kuya kuxhomekeka, sichaza ezinye I-4 yendibaniselwano erhabaxaemva koko:
I-4 yeWands kunye neAce yeeWands kunye neSpades: ibonisa ukuba kuya kubakho iingxaki zonxibelelwano kunye nesibini kunye nokungaqondani, kubalulekile ukuba bobabini bathembeke kwaye bacebise into abafuna ukuyenza.
I-4 yeeklabhu kunye ne-Ace yegolide: inika ubudlelwane obuhle kunye nabahlobo kunye nosapho, ukuqala kohambo lokuphumla apho wonke umntu anokuyonwabela.
4 yeewands kunye I-Ace yeekomityi: ukuba uneqabane, ubudlelwane buhlanganisiwe kwaye buyaqina kwaye buhlala buhleli, bunomdla omkhulu. Kwaye ukuba awukwenzi oko, uya kudibana nomntu oza kukutsala kakhulu kwaye akunike uninzi lokonwaba ngokwesondo.
4 yeewands kunye Inca yesipeyidi: Uya kuba nexesha leengcinga ezingalunganga, ezele kukukhathazeka, ukuphoxeka kunye nokudana. Kubalulekile ukuba ucinge ngokwenzekayo kuwe kwaye ukutshintsha oku.
Zininzi ezinye indibaniselwano, zonke zinendawo elungileyo ekufuneka siyithathele ingqalelo ukuyonwabela okanye ukutshintsha iimeko ezigabadeleyo esinokudlula kuzo.